iStat Menus 6, vhezheni itsva yeiyi ziviso bar ine yakawanda yekuvandudza | Ndinobva mac
Ruben gallardo | | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Iyo kambani Bjango ichangoburitsa itsva vhezheni yayo yekuzivisa nzvimbo yeMac.Ndiyo inozivikanwa iStat Menus iyo yasvika vhezheni yayo 6.0. Kana iwe uchitova mushandisi iwe unozozviziva zvakanaka, uye kune avo vasati vafunga kuyedza mabhenefiti ayo, muStat Menus 6 iwe unowana nzvimbo izere iyo inokuzivisa iwe kune chinzvimbo checomputer yako.
Ichi chishandiso chakatanga kuburitswa makore gumi apfuura. Kubva ipapo, kambani iyi yanga ichigadzirisa chigadzirwa chayo chaicho uye ikozvino, mune vhezheni 10, iyo yatinowana yakawanda yekuvandudza. Chii chimwe, Bjango aida kuenderana nekusunungurwa kwazvino vhezheni macOS High Sierra iyo yakapihwa kune vashandisi mazuva mashoma apfuura mune yayo yekupedzisira vhezheni. Asi isu ngatienderere mberi kukuudza iwe izvo gadziriso iStat Menus 6 inokupa iwe.
Kutanga, iyo kambani ye Software yawedzera widget yemamiriro ekunze umo iwe uchazopihwa ruzivo nezve tembiricha, mamiriro ekunze munzvimbo yako pamwe nekufungidzira kweawa yega yezvingaitika. Ikozvino, kusimudzira uku kunoshanda pasi pekunyoreswa kwegore, kunyangwe kana uchidaro neStat Menus 6 vanokupa mwedzi mitanhatu yebasa.
Saizvozvowo, Notifications zvinogona customized; Ndokunge, mushandisi achakwanisa kuudza kunyorera kuti azivise kana iyo tembiricha tembiricha yasvika "X" madhigirii centigrade; apo kudiwa kwekurangarira kwakanyanyisa uye nezvimwe sarudzo izvo chirongwa zvinopa mushandisi.
Chekupedzisira, iStat Menus 6 inopawo kugadzirisa mari pamwe nekushandiswa kwe hotkeys yekuwana yakananga - uye kuburikidza nekhibhodi - kune zviziviso izvo zvinodikanwa. Uye zvakare, mushandisi anozokwanisa kugonesa madiki majeti mumafomati ekuzivisa kuti ayambire pamusoro pega kufamba. iStat Menus 6 inotengwa pamadhora gumi nemaviri (kuti ivandudzwe); $ 12 yemarezinesi matsva. Iko kune zvakare pasuru yemhuri (anosvika kumakomputa mashanu) ayo akatengwa pamadhora gumi nemasere kukwidziridzwa uye $ 21 yelayisensi nyowani.
Mamwe mashoko: Bjango
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » iStat Menus 6, vhezheni itsva yeiyi ziviso bar ine yakawanda yekuvandudza